निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याउन अर्थमन्त्रालयको सुझाव, १० अर्ब जोगिने !
काठमाडौं –अर्थ मन्त्रालयले प्रस्तावित संघीय निजामती ऐनमा निजामती कर्मचारीको सेवा निवृत्त हुने उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामाथि राय दिँदै अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याउन प्रस्ताव गरेको हो ।
निवृत्तिभरणको भार घटाउन उमेरहद बढाउने प्रस्ताव
अर्थ मन्त्रालयले निजामती कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष कायम राख्न राय दिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले लोकान्तरलाई बताए ।
‘कर्मचारीको उमेरहद ६० वर्ष पुर्‍याउँदा अवकाशप्राप्त गर्ने कर्मचारीको निवृत्तिभरणको भारमा केही कमी आउने भनेर अर्थ मन्त्रालयले राय दिएको छ,’ प्रवक्ता अधिकारीले लोकान्तरसँग भने, ‘अर्थ मन्त्रालयले दिएको रायलाई प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा रायको रूपमा समेटेर मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि पेश गरिने छ ।’
प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा कानून मन्त्रालयबाट पनि राय प्राप्त भए छलफलका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले अर्थ मन्त्रालयको राय स्वीकृत गरेमा आगामी संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा ६० वर्ष पुगेको निजामती कर्मचारीले स्वतः अवकाश प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएपछि मस्यौदाले विधेयकको रूप पाउने छ ।
हाल कार्यान्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको व्यवस्थाका अनुसार ५८ वर्ष उमेर पुगेका निजामती कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउँछन् ।
प्रचलनमा रहेको नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ अनुसार भर्ना भएका सरकारी कर्मचारीको उमेरहद भने ६० वर्ष छ ।
उमेरहद बढाए १० अर्ब जोगिने ?
सरकारी तथ्याङ्कअनुसार यो वर्ष उमेरहद पुगेर सेवा निवृत्त हुने कर्मचारीको संख्या १६ हजारको हाराहारीमा छ । यस्तै आगामी वर्षमा १० देखि १२ हजार सरकारी कर्मचारी उमेरहद ५९ वर्ष पुगेर सेवा निवृत्त हुने अवस्थामा छन् ।
अहिले छलफलमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा सरकारी कर्मचारी सेवा निवृत्त हुने उमेरहद बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याएमा आगामी २ वर्षसम्म अवकाश पाउने अवस्था करिब २५ हजार कर्मचारी सेवामा रहनेछन् । उमेरहद बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याए सरकारले आगामी २ वर्षका लागि नयाँ कर्मचारीको भर्ना र निवृत्त भएका कर्मचारीको निवृत्तभरणमा व्यहोर्नुपर्ने खर्च जोगिने छ ।
२ वर्षमा २५ हजार कर्मचारीले स्वतः अवकाश पाउँदा भने करीब १० अर्ब रुपैयाँ निवृत्तिभरणका लागि हुने खर्चमा थपिने छ ।
‘२५ हजार कर्मचारी सेवामा नै रहने अवस्था भएकाले ठूलो संख्यामा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था रहँदैन,’ निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उमेरहद बढाइए उनीहरूको निवृत्तिभरणका लागि खर्च हुने रकम पनि जोगिने देखिन्छ ।’
निवृत्तिभरण व्यवस्थापन कार्यालयको तथ्याङ्कका अनुसार अहिले २ लाख ४९ हजार सेवा निवृत्त कर्मचारीले निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाउँदै आइरहेका छन् । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त (असार मसान्त)सम्म सेवा निवृत्त कर्मचारीको निवृत्तिभरणका लागि ४० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने जनाएको छ ।